Faritra mafana any Seoul
Aiza ary aiza no hatao?
Fantatrao tsara ny anarana Itaewon, Myeongdong na Hongdae, saingy tena fantatrao ve ny karazana zavatra azonao atao amin'ireto faritra ireto? Ho hitanao ato amin'ny filazalazana blog sy hetsika ho an'ny faritra malaza sy mafana indrindra any Seoul izany! Noho izany, na dia fohy aza ny fijanonanao ao Seoul, dia mety ho afaka misafidy izay toerana tianao ianao hitsidika sy izay zavatra tianao hatao!
Hongdae dia azo antoka indrindra ho toerana mafana indrindra ho an'ireo tanora mitsidika Seoul. Ity faritra misy ny mpianatra ity dia eo akaikin'ny University Hongik ary afaka mandray ny lalamby ianao, andalana 2 mba hamangy ity toerana mahamay ity. Ho hitanao ny zavatra maro tokony hatao, manomboka miantsena ka karaoke, mihinana sakafo matsiro any amin'ny trano fisakafoanana, izay matetika tena lafo. Mandritra ny ankamaroan'ny fotoana, dia hanana fotoana hanampiana amin'ny mpandeha an-dalambe na mpandihy mivantana manao choregraphie mahafinaritra amin'ny hiran'ny kpop ianao. Io faritra io dia tena ankasitrahan'ireo mpizahatany fa koa amin'ireo koreana. Afaka mandeha amin'ny andro ianao na amin'ny alina, dia hahita zavatra mahaliana foana ianao.
Raha Itaewon kosa dia faritra mafana indrindra amin'izao fotoana izao any Seoul ary vao mainka aza aorian'ny fampodinana indray ilay fampisehoana mahomby "Class Itaewon" izay nitondra mpizahatany bebe kokoa tany. Itaewon dia distrika iraisam-pirenena izay ahitanao ny trano fisakafoanana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, fifangaroan'ny kolontsaina sy fivavahana. Eny tokoa, afaka mahita ny trano fivavahana voalohany ao Seoul ao Itaewon ianao, voahodidin'ny fivarotana sy fisakafoanana madio. Fa ambonin'izany rehetra izany, i Itaewon dia malaza amin'ny fety sy fifaninanana. Eny tokoa, misy barany, klioba ary karaoty. Izany no antony tian'ity distrika ity ankafizin'ny vahiny sy koreanina.
Myeongdong no faritra tsy maintsy aleha raha mikasa hiantsena ianao ary hitondra fanomezana sy fanomezana ho an'ny namanao sy fianakavianao. Mazava ho azy fa afaka mahita izay rehetra ilainao ao ianao ary betsaka kokoa! Ary ho an'ireo tia ny kosmetika ity dia paradisa anao, satria marika an-jatony izy ireo avy amin'ny malaza indrindra tsy dia fantatra. Yho hitanao daholo izay rehetra tadiavinao. Ary ny ampahany tsara indrindra aminy dia ny hoe misy sakafo an-dalambe manodidina anao! Afaka mankafy ny miantsena ianao raha mihinana sakafo koreana izay mbola tsy nanandrana taloha, toa ny Egg Bread na Tornado Potato.
Gangnam dia midika ara-bakiteny hoe 'atsimon'ny ony, satria hita eo ambanin'ny renirano Han. Gangnam no afovoan-tarehy maoderina sy mando sy maoderina ao Seoul izay mahasarika ahitàna, anisan'izany ny fivarotana, trano fisakafoanana ary fikarokaroka. Tena malaza amin'ny mpitia vola ny Gangnam. Afaka mahita be ianao toeram-pivarotana toy ny COEX, ary marika mpamorona avo lenta. Raha mahaliana ny mozika Koreana (K-pop) ianao dia afaka mahita masoivoho Kpop marobe toy ny Bighit Entertainment, SM Town, JYP fialam-boly… Ny sain'ny kianjan'ny faritra dia be atao ary miaina amin'ny alàlan'ny fihinanana fihinanana fihinana lakolosy sy bara marobe. tena tsara dihy sy mankafy fiainana mandra-maraina!
COEX any Gangnam
Ny renirano Han sy ny manodidina dia misy ao afovoan-tanànan'i Seoul mampisaraka ny tanàna amin'ny 2. Izy io dia toerana malaza ho an'ny mponina eto an-drenivohitra. Io toerana io dia tena karazana fivahinianana mini nefa tsy mila mandamina mialoha ny fitsangatsangananao. Afaka miala voly sy mankafy fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny ankohonanao, ny namana sy ny olon-tianao ianao any amin'ireo valan-javaboary maromaro manodidina. Ho an'ny oIreo olona mafana fo maniry ny fihoaram-pefy adrenalinina, afaka mankafy ny fanatanjahan-tena amin'ny rano ianao na ny bisikileta mandeha anilan'ny renirano. Ankoatr'izay, raha noana ianao dia afaka manome ny sakafo omenao anao eny an-dalana!
Ny distrika Insadong, ao afovoan-tanànan'i Seoul, fanta-daza eo amin'ny vahiny ny fivarotany sy ny trano fisakafoanana. Ambonin'ny zava-drehetra dia malaza amin'ny làlambe izy sy ny rivo-piainana ara-tantara sy maoderina azonao jerena ao. Izy io dia faritra iray mampiavaka an'i Seoul izay maneho marina ny lasa tany Korea Atsimo. Manodidina ny distrika Insadong dia afaka mahita lapa ianao hatramin'ny vanim-potoana Joseon. Manana kanto manana toerana ambony ao Insadong ihany koa ny zavakanto. Galeri marobe ny fampisehoana ny karazana kanto rehetra manomboka amin'ny sary hosodoko hatramin'ny sary sokitra dia hita na aiza na aiza. Ary avy eo, trano sy trano fisakafoanana nentim-paharazana dia toerana tonga lafatra hamaranana ny fitsidihan'ity distrika ity ..
Nosoratan'i Soukaina Alaoui & Caillebotte Laura
Anarana * Email * Website
Copyright © 2018-2020 Etourism. Zo rehetra voatokana.